admin Februwari 8, 2022 0 Comment Imfundo yezondlo
Mholo! Igama lam ndingu-Allison, kwaye ndingumfundi we-dietetic ovela kwiDyunivesithi yaseHouston. Ndibe nethuba elimangalisayo lokufunda kwi-Galveston County Food Bank. Ixesha lam eGalveston County Food Bank wandibonisa uxanduva oluhlukeneyo kunye neendima ezithathwa ngabafundisi-ntsapho kuluntu, kuquka ukufundisa iiklasi zesondlo, ukukhokela imiboniso yokupheka, ukudala iiresiphi kunye nezixhobo zemfundo kubathengi bebhanki yokutya, kunye nokuphuhlisa ungenelelo olulodwa. ukudala uluntu olunempilo.
Kwiiveki zam ezimbalwa zokuqala kwibhanki yokutya, ndasebenza noMququzeleli oMkhulu weNkqubo yeKhaya, uAle. Inkqubo ye-Senior Homebound ibonelela ngeebhokisi zokutya ezongezelelweyo ezijongene neemeko ezithile zempilo abantu abadala abajongene nazo, ezifana nesifo sikashukela, iingxaki zesisu, kunye nesifo sezintso. Iibhokisi ezenzelwe isifo sezintso ziquka iimveliso zokutya ezilinganiselwe kwiprotheni kunye ne-potassium ephantsi, i-phosphorus, kunye ne-sodium. Ndenze kwakhona amaphecana emfundo yezondlo ukuba afake kunye nezi bhokisi, ngokukodwa ezinxulumene nokungaphumeleli kwentliziyo, i-DASH Diet, kunye nokubaluleka kwe-hydration. Kwakhona mna noAle sancedisa ekuhlanganiseni ezi bhokisi zikhethekileyo kunye namatsha-ntliziyo ukuze zisasazwe. Ndandikuthanda ukuba yinxalenye yeqela lamatsha-ntliziyo, ndincedisa ekwakhiweni kweebhokisi, nokubona umphumo.
Okubonisiwe ngumfanekiso wam ecaleni koyilo lwebhodi yebhodi endilwenze uJanuwari. Ndizibophelele kwiipuns zesondlo ezonwabisayo ekuqaleni konyaka omtsha ukukhuthaza abathengi kunye nabasebenzi ukuba babe nesiqalo esihle kunyaka wabo. NgoDisemba, ndenze ibhodi enemixholo yeholide yeeholide zasebusika. Isinikezelo ebesihamba nale bhodi sibandakanya iingcebiso zeholide ezilungele uhlahlo lwabiwo-mali kunye neresiphi yesuphu elungele uhlahlo lwabiwo-mali yokuhlala ushushu ngexesha leeholide.
Ndikwayile izicwangciso zezifundo kunye nemisebenzi yeeklasi ezininzi zamabanga aphantsi. Kwisicwangciso sesifundo malunga nocwangciso lokutya kosapho kunye nokusebenzisana ekhitshini, ndenze umdlalo ohambelanayo weklasi. Kwasetyenziswa iitafile ezine ukubonisa imifanekiso emine: ifriji, ikhabhinethi, indawo yokubeka izitya, kunye nomatshini wokuhlamba izitya. Umfundi ngamnye wanikwa imifanekiso emine emincinci ekwakufuneka ayihlele phakathi kweetafile ezine ezinemifanekiso. Abafundi babetshintshana ngokuxelela iklasi ngemifanekiso ababenayo nalapho beyibeke khona. Umzekelo, ukuba umfundi unomfanekiso wetoti yee-ertyisi kunye nomnye umfanekiso wamaqunube, baya kubeka amaqunube efrijini, ii-ertyisi ezinkonkxiweyo kwi-pantry, baze babelane neklasi ngento abayenzileyo.
Ndibe nelinye ithuba lokudala umsebenzi wesicwangciso sesifundo esisekiweyo. Isicwangciso sesifundo sasiyintshayelelo kwi-OrganWise Guys, abalinganiswa bekhathuni abafana nezitho kwaye bagxininisa ukubaluleka kokutya okunempilo kunye nendlela yokuphila kwizitho eziphilileyo kunye nomzimba ophilileyo. Umsebenzi endiwudalileyo uquka umfanekiso omkhulu weOrganWise Guys kunye neemodeli ezahlukeneyo zokutya ezisasazwe ngokulinganayo phakathi kwamaqela abafundi. Ngamnye, iqela ngalinye liya kwabelana neklasi ukuba zeziphi izinto zokutya abanazo, yeyiphi inxalenye ye-MyPlate abayiyo, yintoni ilungu elizuzayo kwezo zinto zokutya, kwaye kutheni elo lungu lixhamla kwezo zinto zokutya. Ngokomzekelo, elinye lamaqela laliphethe iapile, iasparagus, isonka esipheleleyo, nesonka esipheleleyo sengqolowa. Ndabuza iqela ukuba zeziphi ezo zinto zokutya ezifanayo (ifayibha), kwaye yintoni ilungu elithanda ngokukodwa ifayibha! Ndandikuthanda ukubona abafundi becinga ngokunzulu kwaye basebenza kunye.
Ndikwakhokele nesicwangciso sesifundo. Esi sicwangciso sesifundo siquka ukuphononongwa kwe-OrganWise Guy, inkcazo malunga nesifo sikashukela, kunye nomsebenzi wombala omnandi! Kuzo zonke iiklasi endiye ndaba yinxalenye yazo, bekuvuyisa ngokukhethekileyo ukubona imincili, umdla, nolwazi olubonakaliswa ngabafundi.
Ixesha elininzi lam kwindawo yokugcina ukutya, ndandikwasebenza no-Aemen no-Alexis, abafundisi-ntsapho ababini bezondlo kwindawo yokugcina ukutya, kwiProjekthi yeKona yeSebe leSondlo. Injongo yale projekthi kukudala ungenelelo kwiivenkile ezikoneni ukuphumeza ukwandisa ukufikelela kwizinto zokutya okunempilo. Ndincede u-Aemen no-Alexis kwinqanaba lokuvavanya le projekthi, ebandakanya ukutyelela iivenkile ezininzi zekona e-Galveston County kunye nokuvavanya iimveliso ezinempilo ezinikezelwa kwindawo nganye. Sijonge imveliso emitsha, ubisi olunamafutha aphantsi, iinkozo ezipheleleyo, i-sodium nuts, kunye nezinto ezidliwayo ezinkonkxiweyo, i-100% yejusi yeziqhamo, iitshiphusi ezibhakiweyo, kunye nokunye. Siye saqwalasela nendlela eyayimi ngayo ivenkile kunye nokubonakala kokutya okunempilo. Sichonge utshintsho oluncinci loyilo kunye nee-nudges ezinokuthi iivenkile zekona ziphumeze ukwenza umahluko omkhulu kwindlela yokuthenga abathengi bevenkile yekona.
Enye iprojekthi enkulu endayigqibayo yayiyiNutrition Toolkit for the Salvation Army. Kule projekthi, ndasebenza noKaree, umququzeleli wemfundo yezondlo. U-Karee wongamela i-Healthy Pantry, iprojekthi ephuhlisa kwaye ikhulise intsebenziswano phakathi kwebhanki yokutya kunye neeparithi zokutya zasekhaya. Umkhosi wosindiso eGalveston mva nje ubambisene nebhanki yokutya kwaye uphuhlise indawo yokutya. Umkhosi wosindiso wawufuna izibonelelo zokufundisa ngesondlo, ngoko mna noKaree satyelela iziko labo saza savavanya iimfuno zabo. Enye yezona mfuno zabo zinkulu yayiyimathiriyeli yesondlo ukuvala inguqu yabathengi ukusuka kwindawo yokuhlala ukuya kwindawo yabo yokuhlala. Ngoko ke, ndadala i-Nutrition Toolkit equka ulwazi lwesondlo ngokubanzi olugxininisa i-MyPlate, uhlahlo lwabiwo-mali, ukhuseleko lokutya, ukuhamba ngeenkqubo zoncedo lukarhulumente (ukugqamisa i-SNAP kunye ne-WIC), iiresiphi, kunye nokunye! Ndenze novavanyo lwangaphambili nasemva koMkhosi wosindiso ukuba ulawule. Uvavanyo lwangaphambili nasemva kovavanyo luya kunceda ekuvavanyeni impumelelo ye- Nutrition Toolkit.
Eyona nto ndiyithandayo malunga noqeqesho kwibhanki yokutya lelona thuba liqhubekayo lokufunda kunye nefuthe elihle eluntwini. Bendikuthanda ukusebenza neqela elinomdla, eliqinisekileyo, nelikrelekrele. Ndinombulelo kakhulu ngexesha endilichithe ndifunda kwiBhanki yokutya yaseGalveston County! Ndivuyiswe ukubona iqela liqhubeka lenza utshintsho oluhle kuluntu kwaye ndijonge phambili ukubuyela kwivolontiya!
egqithileyo ngeposi Previous: Umsebenzisi: Trang Nguyen
Okulandelayo elilandelayo: Ibhlog yangaphakathi: Abby Zarate